खगेन्द्र संग्राैला भन्छन् : म राष्ट्रवादी हाेइन
राष्ट्रवाद नश्लसँग जोडिन्छ । इतिहासैभरि सबै राष्ट्रवादीहरू नश्लवादी देखिएका छन् । समकालीन विश्वको कुरा गर्ने हो भने डोनाल्ड ट्रम्प नश्लवादी राष्ट्रवादी हो । ट्रम्पको राष्ट्रवाद अश्वेत विरोधी, आप्रवासी विरोधी, महिला विरोधी राष्ट्रवाद हो । नरेन्द्र मोदी नश्लवादी राष्ट्रवादी हुन् । राष्ट्रवादले शत्रु खोज्छ । मोदीले दुई वटा शत्रुको रचना गरेका छन् । एउटा मुस्लिम, अर्को पाकिस्तान ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने, नेपालमा कमरेड खड्गप्रसाद ओलीको राष्ट्रवाद पनि नश्लवादी राष्ट्रवाद हो । यो नश्लवादी राष्ट्रवादले आफुलाई श्रेष्ठ देखाउनका निम्ति शत्रुको निर्माण गरेको छ । ओलीले निर्माण गरेको एउटा शत्रु भारतीय विस्तारवाद हो, अर्को मधेसी हो ।
नश्लको आधारमा तपाईंको वर्ण के हो ? तपाईंको भाषा के हो ? तपाईंको धर्म के हो ? हामीकहाँ त अझ तपाईं कुन भूगोलमा बसोबास गर्नुहुन्छ ? यसको आधारमा कोही श्रेष्ठ हुन्छ, कोही तुच्छ हुन्छ । खस आर्य, पहाडवासी, नेपालीभाषी, हिन्दू धर्म मान्ने श्रेष्ठ, थारु, मधेसी महिलासमेत पनि तुच्छ हुन् । आफुलाई श्रेष्ठ देखाउनको निम्ति यस्ले केही तुच्छ चिजहरूको निर्माण गरेको छ । त्यसैले यो नश्लवादी छ ।
तेस्रो कुरा, राष्ट्रवादले अखण्ड नेपालको कुरा गर्छ । तर सारमा विखण्डनकारी हुन्छ । राष्ट्रवादले आफ्नै देशका बन्धुहरूलाई राज्यको वृत्तभन्दा बाहिर राख्छ । त्यसले विखण्डन गर्छ । जस्तो संविधान निर्माण प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गरौं । संविधान कसरी बन्यो ? एकथरीले, एउटा जात अथवा नश्लले अर्को समुदायमाथि हिंसा थोपर्दै, मान्छे मार्दै, रगतको खोलो बगाएर नेपालको संविधान बनेको थियो । पृष्ठभूमिमा भूकम्प थियो । भूकम्पले हल्लिएको नेपाली थियो । फास्ट ट्र्याक भनियो । संविधान निर्माणका अन्तरिम संविधान स्थापित जे जे विधि र प्रक्रियाहरू छन्, ती सबैलाई उल्लघंन गरियो ।
संविधान निर्माण ज्यादतिको बिचमा भएको छ । खासगरी म दुईटा ज्यादतिको उल्लेख गर्छु । टीकापुर घटना घट्यो । टीकापुरको त्यो भूगोलमा अखण्डको नारा थियो । एउटा नश्लले, एउटा समूहले अखण्डको नारा थारुहरूको समानताको आकांक्षा र दाबीलाई उपेक्षित गर्दै अखण्डको नारा ल्याइएको थियो । त्यो पृष्ठभूमिमा टीकापुर घटना घट्यो । घटनामा केही प्रहरी अफिसरहरू मारिए । केही जवान मारिए । एउटा बालक मारियो । यी जो जो मारिए, यिनीहरू सबै पहाडी थिए । त्यसपछि थारू समुदायमाथि राज्यले जघन्य हिंसा थोपर्‍यो । तिनका पसल लुटिए । घरमा आगो लगाइयो । महिलाहरूलाई अपमान गरियो । तर हामीले काठमाडौँबाट के देख्यौं ? जो पहाडी मारिए ती श्रेष्ठ थिए । पहाडी श्रेष्ठ थिए, त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण मिडियाको निम्ति त्यो मात्रै समाचार बन्यो । थारूहरूमाथि थोपरिएको हिंसाको कहिँ पनि चर्चा भएन । किनकी तिनीहरू थारु थिए । त्यो खस आर्य होइन, त्यो नेपालीभाषी होइन, सनातनी शाषक वर्गको सदस्य समुदाय पनि त्यो होइन ।
मधेसको कुरा गर्नुस् । संविधान निर्माण भइरहेको बेलामा मधेसी नेतृत्वका केही असहमतीहरू थिए । अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेका जे जति मानक र मानदण्डहरू छन्, त्यसैको आधारमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने तिनीहरूको आग्रह र दाबी थियो । गरियो के भन्दा एउटा नश्लले, एउटा समुदायले संविधान निर्माण गर्‍यो । मधेस बाहिर पर्‍यो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा त्यो संलग्न भएन । त्यसलाई संलग्न गराइएन । र संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति राख्ने झण्डै ६० जना मानिसहरू मारिए । अन्ततः ६० जना मानिसको रगत लत्पतिएको रक्तरञ्जित संविधान निर्माण गरियो ।
संघीय संविधानको प्रयोजन ऐतिहासिक दृष्टिकोणले राज्यबाट पाखा परेकाहरू, अवसरबाट वञ्चित भएकाहरू, अपमानितहरूलाई राज्यको खोलभित्र ल्याउनको लागि थियो । त्यसले समावेशिताको कल्पना गरेको थियो । तर समावेशिता विरुद्ध देशको आधा जनसंख्यालाई निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर राखेर, त्यसमाथि जघन्य हिंसा थोपरेर मानिस मार्दै संविधान बनाइयो । त्यसैले संविधान निर्माण प्रक्रिया जुन छ, यो विशुद्ध नश्लवादी छ ।
राष्ट्रवाद अतीतमुखी हुन्छ । राष्ट्रवाद भविष्यको कल्पना गर्दैन । अतीतका मूल्यहरूको गौरवगान गरिन्छ । जस्तोः असली हिन्दूस्ताना । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका यस भेगका भूगोलका स–साना टुक्राहरू जोडेपछि एउटा नारा ल्याइएको थियो असली हिन्दूस्ताना । त्यसपछि हिन्दू र हिन्दूत्वलाई राज्यको धर्मको एउटा अंश बनाइयो । हिन्दूत्वलाई देशको पहिचान बनाइयो । हिन्दू बाहेक बाँकी अरु जो थिए, तिनीहरू त्यहिबेलादेखि नै बहिष्करणमा परेका हुन् ।
‘हाम्रा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन’ भनियो । हाम्रा भनेका कसका ? शाहजीहरुका । राणाजीहरूका । तर पूर्खा त मधेसीहरूका पनि थिए । थारुका पनि पूर्खा थिए । तर राज्य तिनले बनाए, जस्को हातमा सत्ता थियो । जसको परम्परा र बर्चस्व थियो, र जोसँग बन्दूक थियो राज्य तिनले बनाए ।
कत्रा दुःखले आर्ज्याको मुलुक भन्दा कस्तो लाग्छ भने पृथ्वीनारायण ति वीर नायक हुन् जो गोर्खादेखि सारा वन फाँड्दै बस्ति बसाउँदै जग्गा आवाद गर्दै आएका हुन्, सबै तिनले नै गरेका हुन् । बाँकी तपाईंका पूर्खाहरू के जुम्रा मारेका बसेका थिए ? मदिरापान गरेर लठ्ठीएका थिए ? अथवा कुम्भकर्णजस्तो के तिनीहरू ६ महिनाको निद्रामा थिए ?
नेपाललाई बहुजातीय देश भनिन्छ । यो देशको निर्माणमा प्रत्येक जातिको योगदान छ । तिनका योगदानका प्रकृतिहरू फरक होलान् । योगदानको मात्रा पनि फरक होला । तर मधेस आवाद गरेको कस्ले हो ? पहाडीहरूले हो ? मधेस आवाद गरेको मधेसीले नै हो । नेपालको सबैभन्दा आदिवासी भन्न लायक थारु समुदाय नै हो । नेपालको इतिहास निर्माणमा, नेपालको सभ्यता निर्माणमा, संस्कृतिको निर्माणमा तिनको पनि योगदान छ । तर यो सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रियामा एउटा जात, एउटा भाषा र एउटा धर्मलाई मात्रै श्रेष्ठ मानियो । बाँकीका योगदानहरूलाई उपेक्षा गरियो ।
राष्ट्रवाद भन्छ, ‘साम्राज्य दुई हारे, हारेन शान हाम्रो ।’ कुन कुन साम्राज्य कसरी हारे र तपाईंको शान कसरी हारेन ? आफ्नो काल्पनिक श्रेष्ठता स्थापित गर्नको लागि यस्ता केही चिजहरू बनाइए । केही मिथकहरू रचना गरिए । केही प्रतीकहरू निर्माण गरिए । त्यसैको आधारमा एउटा श्रेष्ठ भयो, अर्को तुच्छ भयो । एउटालाई श्रेष्ठ भनिन र मानिनको निम्ति बाँकीलाई तुच्छको दर्जामा राखिन पर्ने भयो ।
राष्ट्रवाद र देशप्रेम सर्वथा फरक कुरा हो । आफु जन्मे, हुर्केको परिवेश र संस्कृतिले एउटा सम्बन्धको निर्माण गर्छ । आफुलाई जन्माउने आमाप्रति सबैमा ममता हुन्छ । आफुले टेकेको माटोप्रति सबैमा ममता हुन्छ । त्यो भूमि जस्ले तपाईंलाई अन्न दियो, त्यो आकाश जस्ले तपाईंलाई हावा दियो, त्यो प्रकृति जस्ले तपाईंमा सौन्दर्यचेतनाको निर्माण गरिदियो । त्यसप्रति मानिसमा स्वभाविक अपनत्व र ममता हुन्छ ।
देशप्रेम ममतापूर्ण हुन्छ, कृतज्ञतायुक्त हुन्छ । देशप्रेम नश्लीय छैन । देशप्रेम विखण्डनकारी हुँदैन । यसले विभाजन गर्दैन । यो श्रेष्ठ र त्यो तुच्छ भन्दैन । भूगोलको चौघेरा भित्र जति मानिसहरू बसेका हुन्छन् ति सबैलाई देशप्रतिको माया हुन्छ । माटोप्रतिको, आमाप्रतिको, आफ्नो सभ्यता र परम्पराप्रतिको कृतज्ञता नै देशप्रेम हो ।
जुन बेला संविधान निर्माण भएको थियो, जुन बेला मधेस आन्दोलन भएको थियो र जुन बेला टीकापुर घटना घटेको थियो, त्यो बेला सिंगो मिडिया सत्तामा विलय भएको थियो । मिडिया यति भयानक राष्ट्रवादी भएको थियो, अहिलेका जो राष्ट्रवादी नेताहरू छन्, त्यसको रचना मिडियाले गरेको थियो । टीकापुरमा जो पहाडी मारिए, मिडियाले तिनको श्रेष्ठताको गाथा गायो । थारूहरू मारियो, त्यसको तुच्छताको मिडियामा कहिँ चर्चा नै भएन । मधेसमा त्यतिधेरै मानिसहरू मारिदाँ पनि मिडियाले कहिँ पनि आपत्ति गरेन । ती घटनाहरूलाई मिडियाले यसरी प्रस्तुत गर्‍यो कि, संविधान निर्माणको बेलामा थारू र मधेसीहरू मारिनु मानौं गौरवको विषय हो । त्यस्तो किन गरियो भने सनातनी दृष्टिबाट हेर्दा यो देश खसआर्यहरूले बनाएका हुन् । लामो समयदेखि सत्तामा खसआर्यहरू नै थिए । राज्यको सम्पूर्ण स्रोतसाधनहरूमा तिनको एकलौटी बर्चस्व थियो ।
मैले जुनबेला राष्ट्रवाद सिकिरहेको थिएँ, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म मधेसमाथि कस्तो व्यवहार गरिन्छ भने मधेस सिंहदरबारको मालिकहरूको हो र मधेसी चैं बिहारको हो । किनकी त्यसको वर्ण कालो छ, नेपाली भाषा त्यसको मातृभाषा होइन, त्यसको वस्त्र फरक छ र भूगोल फरक छ ।
अहिले केही कुराहरू फेरिएका छन् । काठमाडौँमा मर्स्या, मधेसी, काले, धोती अचेल कम भनिन्छ । तर कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासले पनि मलाई वीर पृथ्वीनारायणकै सन्तान भनेर सिकाएको थियो । इतिहासले मधेसीलाई कायर हुन् भनेर सिकाएको थियो । त्यसैले मधेसमा ६० जना मानिस मारिदाँ पनि मान्छे मर्‍यो भनेर कहिँ कल्पना गरेन । कोही विदेशी अथवा विदेशको दलाल मर्‍यो, मधेसको भूमिलाई कुनै पनि बेला कतै लगेर बुझाउन सक्ने कुनै पात्र मर्‍यो भनेजसरी मिडियाले मधेसलाई प्रस्तुत गर्‍यो । यस हिसाबमा संविधान जुन पृष्ठभूमिमा जुन प्रक्रियाबाट जसरी निर्माण गरियो, त्यो एउटा अपराधको बिचमा आपराधिक दस्तावेजको रुपमा निर्माण गरिएको छ ।
हामी संघीतामा गएको किन हो ? नेपालमा विभेद छ । त्यो विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न, विभिन्न समुदायका बीच प्रेम, सदभाव, समानता र सहकार्यको निर्माण गर्नका निम्ति हामी संघीयतामा गएका हौं । तर राष्ट्रवादले संघीयताको सारतत्व झिकिदियो । प्राविधिक किसिमको संघीयता मात्रै बाँकी रह्यो । त्यो सबैको साझा भएन । अझै पनि देशको लगभग आधा जनसंख्या यो संविधानसँग असन्तुष्ट छ । त्यो असन्तुष्टी भनेको हामीलाई पाखा पारेर, हामीमाथि बन्दुक र गोली प्रयोग गरेर तिमीले संविधान बनायौ भन्ने हो ।
यो परिस्थिति राष्ट्रवादले निर्माण गरेको हो । यो राष्ट्रवाद नश्लिय छ । यो राष्ट्रवाद गणतन्त्रविरोधी छ । यो राष्ट्रवाद समाजवादविरोधी छ । यो राष्ट्रवाद असमावेशी छ । यो राष्ट्रवाद विभेदपूर्ण छ । सबै परम्पराका सबै रोगहरू यसले बोकेर हिँडेको छ । त्यसैले मलाई माफ गर्नुहोला, म राष्ट्रवादी होइन ।
(पोखरामा जारी नेपाल लिट्रेचर फेस्टिभल २०१८ मा ‘म किन राष्ट्रवादी होइन ?’ विषयक सेसनमा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)